Fossil Gen 5: famaritana, vidiny ary famoahana ofisialy | Androidsis
Eder Ferreno | | Fitaovana Android, SmartWatch
Fossil dia iray amin'ireo marika izay mandefa famantaranandro miaraka amin'ny Wear OS ho toy ny rafitra miasa. Ny orinasa dia efa namela modely ho antsika toy ny Sport, izay manana mpanaraka legiona tsara. Ankehitriny dia anjaran'ny famantaranandro vaovao indray, izay ny Fossil Gen 5. Toy ny fanao amin'ny orinasa, ao amin'ny fizarana izay nanambola Google an-tapitrisany, ampiasao ny Wear OS.
Namela vaovao ho antsika amin'ity orinasa ity ity Fossil Gen 5 ity. Fandraisana anjara vaovao no natolotra tamin'ny famantaranandro, izay mamela ny fampiasana tsara kokoa azy ireo amin'ny fotoana rehetra, izay tsy isalasalana fa mampiseho ny fandrosoana ataon'ny orinasa amin'ity sehatra ity. Lazainay anao eto ambany ny zava-drehetra.
Mahita maodely maromaro izahay, miaraka amin'ny fomba samihafa. Ny voalohany dia Julianna HR, izay manana endrika vehivavy kokoa sy dialy volamena rose. Etsy ankilany manana ny Carlyle hr, miaraka amin'ny sehatra mainty sy volondavenona, fehy maizina kokoa ary famolavolana lahy kokoa amin'ny tsipika ankapobeny. Na dia ny habe sy ny refy aza dia mitovy amin'ny tranga roa.
1 Famaritana Fossil Gen 5
Famaritana Fossil Gen 5
Toy ny fanao amin'ny orinasa, avelany miaraka amina famantaranandro misy kalitao tsara sy asa tsara izahay. Ho fanampin'ny fananana endrika izay mahaliana ny mpampiasa maro eny an-tsena. Izany no antony ahafahan'ity Fossil Gen 5 ity mety ho voan'ny mpanjifa eny an-tsena. Ireto ny masontsivana efa nozarain'ny orinasa:
Asehoy: 1,28 santimetatra AMOLED misy vahaolana 328 x 328 pixel
Processeur: Snapdragon Wear 3100
Tahiry anatiny: 8 GB
Rafitra miasa: Wear OS
Batterie: fahaleovan-tena 36 ora ary misy fiampangana haingana
Fifandraisana: Bluetooth 4.2 LE, WiFi, NFC, GPS
Mifanaraka amin'ny Android 4.4 na avo kokoa ary ny iOS 9.3 na avo kokoa
Fanoherana rano: ATM 3
Sensors: Altimeter, Hazavana manodidina, Gyroscope, tahan'ny fo
Ny hafa: Maody bateria, famahanana andriamby, fanaraha-maso mozika
Refy: 44 x 44 x 12 mm
Ny marika dia mampiasa Wear OS toy ny mahazatra amin'ny tranga misy azy, izay efa ananantsika ilay interface vaovao miaraka amin'i Tiles. Afaka mivezivezy mora foana isika, mikorisa miankavanana na miankavia eo amin'ny efijery famantaranandro. Mampiasa tontonana AMOLED ny orinasa amin'ity tranga ity, izay safidy tsara, tontonana misy kalitao misy fahitana tsara. Ny bateria dia iray amin'ny tanjany ao amin'ny Fossil Gen 5, miaraka amin'ny fizakantena lehibe, ankoatry ny fananana modely bateria marobe. Izy io dia iray amin'ireo asany kintana, manana fomba maro isika:
Mode bateria mitatra: Ireo anjara asa tena ilaina amin'ny famantaranandro ihany no ampandehanana mitovy
Mode isan'andro: Manana fiasa bebe kokoa isika ao, io no fomba fampiasan'ny famantaranandro mahazatra
Fomba amam-panao: Hanome ny mpampiasa ny fahafaha-manamboatra izay fiasa sy toe-javatra mijanona ho mihetsika amin'ny famataranandro
Fomba tsy mandeha amin'ny fotoana fotsiny: Miova ny famantaranandro mba hanehoana ny fotoana fotsiny hisorohana ny fanjifana bateria be loatra
Ankoatra izany, ato amin'ity Fossil Gen 5 ity dia mahita mpandahateny isika, izay iray amin'ireo zava-baovao farany amin'ity tranga ity. Ny orinasa dia nanolotra azy mba hanolotra fanairana am-peo ho an'ny fampandrenesana amin'ny fotoana rehetra. Ankoatry ny famelana ireo fiasa toa ny fifandraisana amin'ny feo miaraka amin'ny Google Assistant na ny fampiasana fandikan-teny miaraka amin'ny Google Translate. Azontsika atao koa ny mamaly antso na mifehy mozika amin'ity fomba ity. Fampiasana mahaliana noho izany.
Ity generasi vaovao amin'ny famantaranandron'ny marika ity dia azo vidiana amin'ny fomba ofisialy. Natsangana hamidy amin'ny tranokalan'ny marika izy ireo. Azo atao koa ny mividy azy ireo any amin'ny orinasa voafantina, na dia miovaova arakaraka ny tsena aza ny fahafaha-miseho. Fa amin'ny ankapobeny dia tsy sarotra ny mahita azy ireo any amin'ny magazay. Na dia mbola tsy manana daty famotsorana aza izahay any Espana, na dia tokony hitranga tsy ho ela aza izany.
Modely enina no natomboka amin'ity Fossil Gen 5. Ny estetika ity ihany no miova, satria mamela antsika rehetra hanana asa sy fika mitovy amin'ny tranga rehetra izy ireo. Inona koa, ny vidiny dia mitovy amin'izy rehetra amin'ny vola 295 dolara, izay manodidina ny 265 Euros hanovana. Manantena izahay fa hahalala bebe kokoa momba ny fandefasana azy any Espana ato ho ato.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Fossil Gen 5: Ireo fiambenana vaovao miaraka amin'ny Wear OS
Alcatel 3088 4G: telefaona vaovao miaraka amin'i KaiOS